Saacadaha suuqa Forex | FXCC
Home / Trading / Qalabka Forex / Saacadaha suuqa Forex
Shaxda Suuqa Tabaha Suuqa
Miiska saacadaha suuqa ee FX waa sahlan, fududaan karo, khariidad kuleyl ah, kaas oo isla markiiba soo bandhigaya maalinta ganacsiga, suuqyada furan oo xiran.
Waa maxay Saacadaha Suuqa qalab muhiim ah?
Qaado si cad oo saldhigyo visaaly ah oo ku saabsan saacadaha suuqyada ganacsiga
Aqoonso waqtiyada ganacsi ee ugu fiican ee maalinta ku haboon qorshooyinkaaga ganacsi
Aqoonsiga waqtiyada leh sicirka sare ee isbedelka suuqyada
Iska ilaali dhaawacyada suuqyada kuwaas oo inta badan keeni kara khasaarooyin aan loo baahneyn oo aan la filayn
Ma jirto xisaabin adag oo loo baahan yahay si loo go'aamiyo marka London la furo ama New York xirto, muuqaal cad oo bixinaya macluumaadka. Ganacsatada hadda waxay aqoonsan karaan waqtiyada ganacsi ee ugu fiican ee maalinta ku habboon qorshahooda ganacsi, laga yaabee waqtiyo ay u badan tahay in ay aad u sarreeyaan suuqa suuqa. Ganacsatadu waxay ka hortagi karaan naxdinta suuqa, maadaama ay suuqa furan yihiin inta badan waxay u nugul yihiin dhaqdhaqaaqyo waaweyn oo badanaaba horseedi kara khasaarooyin aan loo baahnayn oo aan la filayn.